The Gardener: 2015-04-12
အခက်အခဲရှိနေချိန်မှာ မကြောက်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်တဲ့ သဘာဝဟာ သိပ်ကို လေးစားစရာကောင်းတယ်။ ကြောက်တဲ့သဘောဟာ လူ့သဘာဝထဲမှာ ကိန်းနေတာပဲ။ လူဟာ မသိမသာကြောက်တာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုရှိတဲ့သူဟာ ကြောက်တယ်။ လိုနေတာ မရတော့မှာ ကြောက်တယ်။ မပြည့်စုံတဲ့သူဟာ ကြောက်တယ်။ ဟန်ဆောင်သူဟာ အလိမ်ပေါ်မှာကြောက်တယ်။ သူရဲကောင်းဟာ သွေးကြောင်ရမှာ ကြောက်တယ်။ ကြောက်တဲ့သဘောက လူမှာ သဘာဝလိုဖြစ်လာတယ်။ ယုတ္တိရှိရှိကြောက်တာလည်းရှိတယ်။ ယုတ္တိမတန်တာကိုကြောက်တာလည်းရှိတယ်။ ကြောက်ပြီဆိုရင် လူဟာ ဘယာဂတိဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ ကြောက်တာကြောင့် မမှန်တာလုပ်တော့တာပဲ။ နုိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများမှာတော့ တော်ရုံတန်ရုံအကြောက်တရား ကင်းတာတွေ့ရတယ်။ လူဟာအကြောက်တရားကိုလျှော့ချနိုင်မှ လူကြီးလူကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ တုိုင်းပြည်တစ်ပြည်၊ လူမျိုးတစ်မျိုး ကောင်းစားဖို့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ လူကြောက်ဖြစ်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ အခက်အခဲမရှိရင်လည်း ခေါင်းအေးအေး၊ အခက်အခဲထဲမှာလည်း ခေါင်းအေးအေးနဲ့သွေးအေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်ရမယ်။ အားတင်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ ဒါကိုက သတ္တိပဲ။
လူတွေရဲ့ သဘောက ထူးထူးခြားခြားကြီး တစ်ခုခု အစွမ်းပြမှ တော်တယ်၊တတ်တယ်၊စွမ်းတယ်ထင်ကြတာ။ တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝမှာ တစ်ခြားသူကို ဒုက္ခမပေးဘဲ သာသာယာယာလေး နေသွားတယ်ဆိုရင် အင်မတန် ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူလို့ဆိုနိုင်ပြီ။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် အေးအေးချမ်းချမ်းသွားပြီး၊ တခြားသူတွေကို စိတ်ဒုက္ခမပေးတဲ့သူဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ သူတော်စင် ဖရန်စစ်ဟာ သူ့ရဲ့ဆုတောင်းမှာ ဒါကို နှစ်ခါတောင်းတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ကင်းပျောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် မျှော်လင့်ရာအကြောင်း ဖြစ်စေပါလို့ နံပါတ်လေးမှာ တောင်းပြီး၊နံပါတ်ခြောက်အချက်မှာ ဝမ်းနည်းသူတွေအတွက် ဝမ်းမြောက်ရာအကြောင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။ သူတောင်းတဲ့ပုံစံက သူ့ရဲ့ဘဝကို ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာ စတေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဆုိုပြီး ဆန္ဒပြုဆုပန်တာမျိုးပဲ။ ဒီလိုသူတော်ကောင်းစိတ်ထားမျိုးကတော့ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူး။ အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ လူသားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးရည်သတ္တိလို့သာ ခံစားရတယ်။ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ အစွမ်းတွေထက် စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုကိုပဲ အစွမ်းအစ အစစ်အဖြစ် ခံယူသင့်တယ်။
နားလည်မှုဟာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ လူဟာ တစ်ချိန်ချိန် တိုက်ဆိုင်လာမှ ကိုယ်နားလည်ရမှာတွေ နားလည်လာတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှပဲ နောင်တရစရာရှိရင် ရတော့တယ်။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ နောင်တမရဘူး။ အင်မတန် မာနကြီးလေ၊ နောင်တမရလေပဲ။ မာနကြီးတဲ့သူတွေဟာ တခါတခါ မာနကြောင့်ပဲ ပိုမှားကုန်တယ်။ မာနကလည်း အထိအခိုက်မခံနိုင်ဘူး။ ကြောက်တယ်။ မာနကြီးတဲ့သူဟာ ထမင်းအငတ်ခံနိုင်တယ်။ မာနကိုတော့ အောက်မချနိုင်ဘူး။ ဆရာတော် ဦးဇောတိက တစ်ခါဟောဖူးတယ်။ ထမင်းမစားရရင်တောင် သွားကြားထိုးနေလိုက်တယ်တဲ့။ မစားရဘူးအထင်သေးခံရမှာပိုဆိုးတယ်။ မာနခံနေရင် မြင့်မြတ်တဲ့တရားမရဘူး။ မာနမရှိရင်ကြတော့လည်း အချောင်သမား ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ရှိသင့်တဲ့ မာနလောက်တော့ရှိရမယ်။
တရုတ်သိုင်းဝတ္ထုတွေထဲမှာ အမြဲပါတာတစ်ခုရှိတယ်။ ဓားချက်က မြန်ဆန်လွန်းလုို့ ထိသွားတာမသိလိုက်ဘူးဆိုတာ။ စိတ်မှာရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ တစ်ချိန်က ဒဏ်ရာတွေဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာကြမှ ထိခိုက်ခဲ့မှန်းသိကြရတယ်။ ကိုယ်ထိခဲ့တာဆို တော်သေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်ဆေးကုလို့ရတယ်။ ကိုယ်က လျှောက်ခုတ်ခဲ့တာဆို ခက်မယ်။ ကြီးလာလေ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ့်အမှားပါလို့ ပြောရခက်လေ ဖြစ်လာကြတယ်ထင်တယ်။ မှားခဲ့တာကိုရှက်ကြတယ်ထင်တယ်။ မှားတာက လူ့သဘာဝပဲ။ မှားမှာစိုးလို့ ဘာမှမလုပ်တဲ့သူကတော့ မှားလည်းမမှားဘူး။ မှန်လည်းမမှန်ဘူး။ ထုံပေပေဘဝမှာပဲ အချိန်ကုန်သွားတယ်။
မှားမှာကြောက်လို့ တစ်ခုခုမလုပ်ရဲဘူးဆိုရင် ဘဝရဲ့ ဒုိုင်မင်းရှင်းတွေ ကျဉ်းသွားတယ်။ အမှားမှာကြာရှည်နေတော့လည်း လူ့စိတ်က အမြစ်တွယ်သွားတယ်။ ဘဝမှာ လူတိုင်းအချိန်တစ်ခုရခဲ့ကြတယ်။ လောကအတွက် ကောင်းအောင် ဘာမှမလုပ်ရသေးဘဲ သေခါနီးဖြစ်လာပြီဆိုရင် သိပ်ရှုံးတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှု၊သူ့ဘဝလေးပဲသူကြည့်ပြီး ကျန်တာတွေ လျစ်လျူရှုလုိုက်မယ်ဆုိုရင် သူဟာ တကယ့်လူသားတစ်ယောက်မဖြစ်လာသေးဘူး။ ပရုိုင်းမိတ်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ MIT ဝင်ခွင့်ရတဲ့ ကျောင်းသား MIT မသွားဘဲ ကလေးတွေကို သင်္ချာပြပေးတဲ့အကြောင်း ဖတ်လိုက်ရဖူးတယ်။ တကယ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကြောင့် တခြားကလေးတွေ သင်္ချာကောင်းကောင်းတတ်လာတယ်ဆိုရင် အင်မတန် အောင်မြင်တဲ့ဘဝပဲ။ လောကကြီးမှာ လူတိုင်းက လွယ်တဲ့လမ်းပဲလိုက်တယ်။ ကိုယ့်မိသားစုဘဝလေး အောင်မြင်ဖို့လောက်မှာပဲ လမ်းဆုံးသွားတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီး၊ သေးသိမ်တဲ့ လမ်းကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ဟာပြောင်းသွားတယ်။ လွယ်တာတွေပဲလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် fury ကားထဲမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲက အဆိုလေးတစ်ခုထည့်ထားတာလေး ပြန်ကိုးကားချင်တယ်။
Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I; send me. (‭Isaiah‬ ‭6‬:‭8‬ )
ဘယ်သူမှ မသွားချင်တဲ့ခရီး၊ ဘယ်သူမှ မယူချင်တဲ့တာဝန်ကို ဘုရားက၊ကံတရားက၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲက အသံက ပေးလာပြီဆိုရင် ထပြေးလို့မရဘူး။ ငြင်းဆန်လို့မရဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုလွှတ်ရမလဲမေးလာတဲ့အခါ၊ လက်ညှိုးလေးထိုးပြီး၊ ဟိုလူ့ကုိုလွှတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ ရန်ကုန်အမွေအနှစ်တွေအတွက် ဘယ်သူ့လွှတ်ရမလဲဆိုရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ဘာလုပ်ပေးမယ် ဘယ်သူမှမတွေးဘူး။ ဦးသန့်မြင့်ဦးကိုလွှတ်လိုက်၊ သူလုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြတာပဲ။ လူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလေးတစ်ခုခုရှိရင် ဘယ်လောက်သေးသေး၊ မစွန့်နိုင်ဘူး။ ကျန်တာတွေ အရေးမကြီးသေးဘူး။ ကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်ရေးကပဲ နံပါတ်တစ် ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ လူကြောက်တွေ များလာရင် အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်၊ အဲဒီအဖွဲ့အစည်း၊ အဲဒီနိုင်ငံ ခက်ခဲသွားတယ်။ ခေါင်းရှောင်တဲ့သူတွေများလာတယ်။ ခေါင်းဆောင်ရတာ နစ်နာတာကိုး။ ကျန်တဲ့သူတွေကရော ဘာလို့ လုပ်နေကြတာလဲ။ ဦးကျော်သူ ဘာလို့ အသုဘပို့နေလဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေ မပို့လို့ပေါ့။ ရှင်းနေတာပဲ။ သူတုို့တွေကတော့ စိတ်ထဲကခေါ်သံကို သေချာနားထောင်သွားတဲ့သူတွေ။ ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်၊ ဘယ်သူလုပ်မလဲဆိုလာရင် ကျုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထလုပ်လိုက်တာပဲ။ fury ကားထဲမှာတော့ နောက်ဆုံးသေမယ့်လမ်းကို ဘယ်သူမှမရွေးချင်လဲ သူတုို့အနာခံရွေးလိုက်တာပဲ။ ထွက်ပြေးပြီးပုန်းနေရင်လွတ်တယ်နော်။ ထွက်ပြေးလို့ရတယ်။ အဲဒီလမ်းကို သူတုို့မရွေးဘူး။ ဘာလို့မရွေးလဲ။ သူတုို့ထွက်ပြေးရင် နောက်မှာ လိုက်လာမယ့် သူတုို့တပ်သားတွေ အကုန်သေကုန်မယ်။ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတဲ့လမ်းက လွယ်သလိုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်မှာ အဲဒီဒဏ်တွေကို ကိုယ့်လူတွေပဲ ခံရမှာ။ ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ သစ်တောတွေ အကုန်ခုတ်ရောင်းလိုက်တော့ ကျန်တဲ့ ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေ အပူချိန်မြင့်တဲ့နိုင်ငံမှာ ကျန်ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီ ကမ္မဝဋ်ကနေ မကျွတ်ဘူး။ လွယ်တဲ့လမ်းကိုရွေးလေလေ၊ ပိုခက်တာတွေ ဖြစ်လေလေပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တဥခွံလေးထဲကထွက်ဖို့ကိစ္စကိုက ခက်ခဲတယ်။ အဲဒါအခက်ဆုံးပဲ။ တဏှာယောကျာ်းလက်သမားက စဆောက်ကတည်းက body fit လေးဆောက်ထားတာ။ ဒီအတ္တကိုခွဲထုတ်လိုက်ဖို့ လူဟာ သေရမှာထက်ကြောက်တယ်။ အနတ္တကိုကြားရမှာတောင်ကြောက်တယ်။ လူဟာ အကြောက်တရားအားလုံးထဲမှာ အနတ္တကိုအကြောက်ဆုံးပဲ။ အနတ္တကို မကြောက်ခဲ့ရင် လူဟာ လူ့ဘုံမှာ ခန္ဓာထပ်ဆောက်မယ့် တဏှာမကျန်တော့ဘူး။ သူ ဒီဘုံကနေလွတ်သွားတာကြာပြီ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် ခက်တာတွေလည်း နည်းနည်းလေး ဖဲ့ယူပေးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။ အခက်ကြီးထဲမှာ အလွယ်လေး နည်းနည်းဆီဖြည့်ခဲ့ကြရင်ကောင်းမယ်။ အတ္တဥခွံကို တူနဲ့ထုနေဖို့မလိုဘူး။ အတ္တဟာရှိသမျှဟာ ငါ့ဟာလုပ်နေတာ။ ငါ့ဟာတွေဟာ ငါမရှိတဲ့တစ်နေ့ ငါ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူး။ ငါ့ဟာတွေဟာ မခိုင်မြဲတော့ဘူး။ စကားလုံးတွေအားဖြင့် မခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။ အတွင်းအနှစ်သာရအရ မခိုင်မြဲဘူး။ အနာထပိဏ်ဟာ သိပ်ချမ်းသာလွန်းလို့ ဇေတမင်းသားရဲ့ ဥယျာဉ်ကိုအသပြာဖြည့်ဝယ်လှူခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း၊ သူဆင်းရဲသွားတာပဲ။ ကိုယ်က ဘီလျံနာဖြစ်ပြီပဲထားပါဦး၊ စစ်ဖြစ်လို့ လာလုသွားရင် ကုန်သွားမှာပဲ။ အရာအားလုံးဟာ အကြောင်းအထောက်အပံ့တွေနဲ့ပဲ တည်နေတယ်။ အဲဒီအခြေခံအကြောင်းလေးတစ်ချက်ချော်သွားရင် ပျက်တာပဲ။ လူဟာ ကျန်းမာနေတယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းနေသေးလို့ပဲ။ ဦးနှောက်မှာ သွေးလေးခဲသွားရုံနဲ့ တခြမ်းလေဖြတ်သွားတာပဲ။ ကင်ဆာကြိတ်လေးဖြစ်သွားတာနဲ့ သေဖို့ သိပ်နီးသွားတာပဲ။ ဒါတွေက တားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ သတိထားပြီး ပြင်ဆင်နေရက်နဲ့လည်း အကြောင်းတွေက မှားနေရင် အကျိုးဆိုးတွေ ပေးတော့တာပဲ။ အတ္တနဲ့တည်ဆောက်တာတွေဟာ သိပ်ကိုကွဲရှလွယ်လွန်းနေတာ။ တမင်ကွဲအောင်ရှအောင်လုပ်ထားလို့မဟုတ်ဘူး။ အတ္တရဲ့အရည်အသွေးကိုက ကြွပ်ဆတ်တဲ့ မှန်လိုပဲ။ သူ့ဟာသူလည်း လန့်ကွဲသွားနုိုင်တယ်။ လူဟာ ပိုင်ဆိုင်တာတွေ စွန့်ရပြီဆိုရင် သေအောင်နာတာပဲ။ အတ္တကြီးရင်ကြီးသလောက် နာကျင်ကြတာ။ တစ်ချို့ဆိုသွေးတောင်အန်တယ်။ ရင်ကွဲနာကျတယ်။ အကုန်လုံး အတ္တကြီးလို့ဖြစ်တာတွေပဲ။ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်တယ်။ အတ္တဟာ ကိုယ်ပိုက်ထားမိတဲ့ ဗုံးတွေလိုပဲ။ များများပိုက်ထားလေ၊ အန္တရာယ်ပိုများလေပဲ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အတ္တနဲ့တည်ဆောက်တာတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပျောက်သွားတာပဲ။ ချစ်တဲ့သူတွေဟာလည်း သူ့သက်တမ်းနဲ့သူ သွားတာပဲ။ အားလုံးအတူသွားကြတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်လှည့်စီသွားကြတာ။ အတ္တနဲ့ဆွဲထားလို့မရဘူး။ သူ့ကံနဲ့သူ၊သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကံနဲ့သူ၊ သူ့အကျိုးပေးနဲ့သူ ပျက်တယ်။ ဒါကို အတ္တက သိပ်တုန်လှုပ်တယ်။ သိပ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆုံးသွားလို့ တစ်ရက်လောက်ငိုရင်၊ ဒါက ပုံမှန်ပဲ။ နေ့တိုင်းငိုနေပြီဆိုရင်တော့ သူ့အတ္တကို သူအစာကျွေးနေတာပဲ။
အခက်ကြီးထဲမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတာကိုပဲ အဓိကပြောချင်တယ်။ လူ့ဘဝကြီးဟာ ခက်တယ်။ တစ်နေ့တာဝတ္တရားတွေဟာ ခက်တယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ခဏငယ်တိုင်းကို သတိတရားရှိရှိနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားနုိုင်ရင် အောင်မြင်တဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတာပါပဲ။ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ အပြင်လူတွေ မသိနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကပဲ သိတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ လိုအပ်မှုတွေ တကယ်ပြည့်စုံလာရင် ပြင်ပကလိုအပ်မှုတွေ လျော့သွားတယ်။ မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဟာ မငြိမ်းချမ်းတဲ့ အပြော၊အတွေး၊အကြံတွေနဲ့ အပူတွေဖြန့်မယ်။ အေးချမ်းတဲ့သူဟာ သူ့အအေးဓာတ်နဲ့သူ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုခုကို အနာဂတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်။ ဒါဟာလူပဲ။ လူဟာ အသိဥာဏ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းတယ်။ မြင့်မြတ်မှုကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ်။
blogspot မှာရေးထားသမျှဟာ google သက်တမ်းရှိသလောက်တော့ ခံလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန် google ပျက်ရင်ဒါတွေ ပျက်သွားမှာပဲ။ စာဖတ်တဲ့သူမရှိတော့တဲ့တစ်နေ့မှာ စာပေရဲ့သြဇာဟာ ပျက်သွားမှာပဲ။ အတွေးအမြင် လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမရှိတဲ့တစ်နေ့မှာ အမှားတွေအားလုံးအစကနေ ပြန်သင်ယူကြရမှာပဲ။ နောက်ရှင်သန်ရမယ့် ကလေးတွေအတွက် စစ်ပွဲတွေထားခဲ့ကြ၊ အနုမျူလက်နက်တွေထားခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာ အသုံးမကျတဲ့ မျိုးဆက်ပဲ။ ကိုယ့်မိသားစုဆိုတဲ့ ငတေလေးမာနေရင် ဘယ်သူသေသေစိတ်ဓာတ်နဲ့ ရှင်သန်နေတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း ရှက်တယ်။ လှူတာတန်းတာတောင် အရှက်ပြေ လှူတဲ့သဘော နည်းနည်းလေးပါတယ်။
စာအုပ်တွေလှူလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို စာဖတ်ချင်စိတ်လှူလို့မရဘူး။ ဘယ်အရာမှ သိပ်အလွယ်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ ပရဟိတဆေးခန်းမှာ ဆေးအလကားတောင်းပြီး ပြန်ရောင်းစားတဲ့သူကို ခင်ဗျားရိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ပရဟိတ လုပ်လို့မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလှူဖို့အသွားမှာ ဘုန်းကြီးကားက ကိုယ့်ကားထက် အပုံကြီးသာပြီး၊ ဘုန်းကြီးဖုန်းက ကိုယ့်ဖုန်းထက် မော်ဒယ်နှစ်ဆင့်လောက်မြင့်နေရင် ဘုန်းကြီးကိုလှူမှာလား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆွမ်းကျန်လေးပဲ စားပြီးပြန်ခဲ့ရမလားဆိုတာ တော်တော်စဉ်းစားရကြပ်တယ်။ တကယ်လိုတဲ့နေရာတွေမှာ လှူဖို့နဲ့၊ အဲဒီနေရာတွေမှာ တကယ်လိုအပ်ကြောင်းပြောပြဖို့လောက်တော့ တော်တော်များများတတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပဲကောင်းတာ သင့်တော်တယ်။ စက်ဘီးနင်းတဲ့အခါ သိပ်အားစိုက်နင်းလွန်းရင် ခဏလေးနဲ့မောသွားတယ်။ ကြာရှည်မနင်းနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကောင်းနိုင်တာထက် ပိုကောင်းပြတဲ့လူတွေဟာ မောသွားတာပဲ။ ရေရှည်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ အလှူအတန်းမှာလည်း ကိုယ့်အတိုင်းအထွာနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ ရေရှည်သွားရဦးမယ်လေ။ အသေးအဖွဲလေးဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာလေးတွေလုပ်လိုက်ပေါ့။ လမ်းပေါ် ခဲလုံးလေးတင်နေရင် ကားကြိတ်ပြီးစင်ရင် ကလေးတွေ၊လူကြီးတွေ မျက်လုံးကန်းနိုင်တယ်။ အဲဒါလေးတွေ လမ်းဘေးချဖို့ကိုယ်သိရင် လုပ်လိုက်ပေါ့။ ငွေမရှိလည်း လုပ်စရာအလှူတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဘဝမှာ အခက်အခဲ အမြဲရှိနေမှာပဲ။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သွားကြဖို့ ကြိုးစားရမှာပဲ။ ခက်နေတုန်းမှာလည်း စိတ်ကုို လွယ်အောင်ထားနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီနေရာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာအစစ်ပဲ။ လူဟာ energy level ပေါ်မူတည်ပြီး ဘဝသစ်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသိတရားဟာ ကမ္မပစ္စယောအနေနဲ့ရော၊ ဝိပါကပစ္စယောအနေနဲ့ပါ နောက်ဖြစ်မယ့် energy အမျိုးအစားမှာ အကျိုးပေးနေမှာပဲ။ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်း energy သဘောအရတော့ ဆက်လက်ပြောင်းလဲစရာမလိုတော့တဲ့ အခြေအနေရောက်သွားတာပဲ။ energy ဂိတ်ဆုံးပဲ။ အခက်ကြီးတွေကလည်း ဂိတ်ဆုံးမှာငြိမ်းမှာပဲ။ မငြိမ်းခင်လေးမှာ ... ကိုယ့်ဘဝကိုယ်တည်ဆောက်ရင်း အနာဂတ်မှာ ရှင်သန်ကြမယ့် လူတွေအတွက် လွယ်ကူအောင် တစ်ခုခုကူညီပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီစာကိုရေးတယ်။ ဘဝမှာ ကိုယ်တကယ်လုပ်နိုင်တာ ခပ်နည်းနည်းပဲရှိတယ်။ အဲဒီနည်းနည်းလေးကို အရည်အသွေးကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ သစ်ပင်စိုက်သလိုပဲ၊ စိုက်တိုင်းလည်းမပေါက်ဘူး။ ပေါက်တိုင်းလည်းမပွင့်ဘူး။ ပွင့်တိုင်းလည်းမသီးဘူး။ သီးတိုင်းလည်း သက်ဆိုးမရှည်ဘူးပေါ့။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့2cents ကိုမထည့်ဝင်ဘူးဆုိုရင် မျိုးဆက်ဟောင်းတာဝန်မကျေဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေကို မိုက်မဲမှုတွေလို့ ဝန်ခံခဲ့တာဟာလည်း သစ္စာတရားတစ်ခုပါပဲ။
ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာဟာ လူတုိုင်းနည်းနည်းလေး အချိန်ပေးပြီး တည်ဆောက်လိုက်ရင် ပိုပြီး မြန်မြန်ဖြစ်တာပေါ့ ....။ ကိုယ်နေချင်တဲ့ကမ္ဘာလေးတစ်ခု .. ကိုယ်မနေလိုက်ရရင်တောင် အနာဂတ် ကလေးတွေ နေနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိတယ် ....။
ပျော်စရာလက်ကျန်လေးတွေကို ဆက်မွေးထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေပဲချန်ထားခဲ့ရမှာမဟုတ်လား။ ။
ငယ်သူငယ်ချင်းက sangfroid ဆိုတာနဲ့ အကျယ်နည်းနည်းချဲ့ပြီး sangfroid လိုက်တယ်။ ကိုယ်မကျစ်လစ်ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါတော့။
သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘောက ကွမ်းစားသလိုပဲ၊ စားနေတုန်းလည်း ဝါးနေရတာ အရသာရှိသလိုလို၊ ဒါပေမယ့် အင်အားလည်းမဖြစ်ဘူး။ ပိုက်ဆံလည်းကုန်တယ်။ ထွေးထုတ်နေရတာပဲ။ အလုပ်လည်းရှုပ်တယ်။ ဟိုတလောကပဲ အရင်ခေတ်ကလူတွေ အခုခေတ်ကလူတွေလောက်လည်း ဥာဏ်ထက်တာမဟုတ်ဘဲ တရားတွေ ဘာလို့ရကုန်တာလဲဆိုတာကိုတွေးမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ တရားနည်းနည်းနာကြည့်တော့ အဲဒါကို ဆရာတော် နန္ဒမာလာဟောတာတာရှိတယ်။ အဖြေကတော့ တကယ်မလိုချင်လို့တဲ့။ အဲဒါကို သဘောကျတယ်။ တကယ်တမ်း ကျွတ်တမ်းဝင်ချင်တဲ့သူတွေဆို သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုမှာ ငြီးငွေ့မှုဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါတွေ မဖြစ်ဘဲ အားထုတ်ရင် တော်ရိရော်ရိ ပဿနာပဲဖြစ်တယ်။ ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူး။ သံဝေဂဥာဏ်အားနည်းသွားတာက အခြေခံပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ အခြေခံပြဿနာတွေက မသိမသာလေးပျောက်နေတာတွေ့ရတယ်။
ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အခြေခံပြဿနာလေးတွေက ငုပ်နေတယ်။ ကလေးတွေ game ပဲဆော့ပြီး စာမကျက်ချင်တာဘာကြောင့်လဲ။ အဲဒီမှာလည်း အခြေခံပြဿနာရှိတယ်နော်။ တရားမှာပဲ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ကလေးပညာရေးမှာလည်း ပြဿနာရှိတယ်။ game က အသံပါတယ်။ အရုပ်ကလေးတွေကလည်း လှတပတလေးတွေ။ ပြီးတော့ နောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆော်ပေးတယ်။ အောင်မြင်မှုရရင် ဝမ်းသာစေတယ်။ အဲဒါတွေက လူ့ရဲ့ ego ကို တိုက်ရိုက်သွားတယ်။ လူက အောင်မြင်တာကြိုက်တယ်။ နိုင်ရတာကြိုက်တယ်။ ပျင်းစရာကောင်းတာမကြိုက်ဘူး။ game သိပ်ဆော့တဲ့ ကလေးတွေ စာမကျက်နိုင်တော့ဘူး။ ပျင်းစရာကောင်းတာကိုး။ အပြင်မှာ ကလေးချင်းမဆော့တော့ဘူး။ သိပ်ရိုးတာကိုး။ ကလေးတွေကစားတဲ့ ဘောလုံးကန်တာ၊ပြေးတာ၊လွှားတာတွေက game လောက်တော့ မစုံလင်ဘူး။ စာကျက်ရတာထက်တော့ နည်းနည်းလေးသာတယ်။ မူရင်းပြဿနာက လူသားရဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့ လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ ကြာကြာမနေနိုင်တော့အောင် စိတ်က game မှာ ငြိသွားတဲ့အချက်ပဲ။ ငြိသွားပြီဆိုရင် ဥပါဒါန်ဖြစ်ပြီ။ ဆေးလိပ်၊အရက်၊ဘိန်း၊မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး ငြိသွားတာ ဥပါဒါန်ပဲ။ စိတ်ကကြိုက်လို့ စွဲသွားတာပဲ။ မကြိုက်ရင်မစွဲဘူး။ တစ်ချို့လည်း မကြိုက်ဘဲ သုံးရာက သွေးမှာလိုအပ်မှုဖြစ်သွားတာကနေ ငြိတာလည်းရှိတယ်။ vampire တွေလိုပေါ့။ သွေးသောက်ဖို့က သူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သွားတာ။ game ကစားနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာ တခြားဘာကိုမှ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဆိုရင် အခြေခံပြဿနာအသေးလေးကနေ မိုးမီးလောင်သွားတာပဲ။
ပြဿနာသေးသေးလေးတွေကို ပေါ့ပေါ့လေးမထားသင့်ဘူး။ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ရှုင်းရတယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ချိန်မှာကြီးထွားလာပြီး ရှင်းမရတော့ဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံးကျောင်းမှာထားလိုက်ရုံနဲ့ စာတတ်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူး။ အခြေခံပြဿနာတွေရှိနေတယ်။ အဲဒီအခြေခံပြဿနာကို နားလည်ဖို့မကြိုးစားရင် အဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာရေးအတွက် ခက်သွားလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင် ပညာကောင်းကောင်းမတတ်ဘဲ ကလေးတွေကို မိုးပျံအောင်တော်စေချင်တဲ့ မိဘတွေအတွက် အင်မတန်ခက်တယ်။ လူငယ်ဘဝက ကိုယ့်ရဲ့ မိုက်မဲတွေဝေညံ့ဖျင်းနုံအမှုတွေအတွက် ကိုယ့်ကလေးလက်ထက်မှာ တိုးရင်းပေါင်းဆပ်တဲ့သဘောပဲ။ ဂရိတွေမှာတော့ ဒါကို တစ်လုံးတည်းပြောတဲ့စကားလုံးရှိလိမ့်မယ်။ မြန်မာလိုတော့ ကုက္ကုစ္စနောက်ပိုးတက်ခြင်းလို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်ထားရင်ကောင်းမယ်။ အဲဒါမလုပ်ကောင်းဘူး။ ကလေးမှာရှိတဲ့ အခြေခံပြဿနာကို ရှင်းပေးပြီး၊ သူ့လမ်းသူသွားနိုင်အောင် ပျိုးထောင်ပေးရုံပဲကောင်းတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးမှာ အခြေခံပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ အစိုးရမှာရော အခြေခံပြဿနာမရှိဘူးလားဆိုလာရင် သိပ်ရှိတာပေါ့လို့ဖြေရမှာပဲ။ ခေတ်ကပြောင်းနေပြီ။ နှလုံးသားအဟောင်း၊ ဦးနှောက် အဆွေးကြီးတွေနဲ့ တရွတ်တိုက်လိုက်နေရင် ကိုယ်တိုင်တင်မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်ပါ ခွေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကို နေရာပေးလိုက်စမ်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ လဲမသေသွားပါဘူး။ ယောနိသောမနသီကာရနဲ့ ရဲရဲရင့်ရင့် ဖြောင့်မတ်လိုက်စမ်းပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ လူနည်းစု ဘီလျံနာဖြစ်ဖို့ကိစ္စထက် အရေးကြီးမှန်းမသိကြသေးဘူးဆိုရင် အခြေခံပြဿနာမှာ ရပ်နေပြီ။ ရိုးသားမှုမရှိရင် ကျန်တာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ ရိုးသားပြီး ပညာတတ်တဲ့လူတွေ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားထဲပါဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ ပါဝင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်။ လူချင်းတန်းတူဆက်ဆံတတတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေကနေမစဘဲ ပွဲတိုင်းပါချင်တဲ့ ထမင်းသိုး၊ဟင်းသိုးစိတ်ဓာတ်ကနေ စရင် ကလေးဆန်တဲ့ အစိုးရဘဲဖြစ်မယ်။
လူတွေဟာ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာ ကောက်ရိုးမီးလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။ မတရားတဲ့သူ မပြင်သေးသ၍ ဆန့်ကျင်ရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာအဲဒီစိတ်ဓာတ်အားနည်းတဲ့အတွက် မတရားမှုဟာ ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။ တစ်ခုခုဆီ အမြဲလမ်းလွှဲခံလိုက်ရတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်းတောင်းဆိုရင် ပိုပြီး အကျိုးများတယ်။ မှားတဲ့သူတွေ လွတ်နေတယ်။ ဥပဒေရဲ့လက်တံဟာ တိုလိုက်ရှည်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ဥပဒေကို အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ရနေတာတွေ့ရတယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တဲ့ကိစ္စမှာ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ကျောင်းသားတွေဘက်က တိုးလို့ရိုက်နှက်ရသယောင် လီဆယ်လုပ်ကြံပြီး ထုတ်လွှင့်သွားတာမျိုးက အင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့ နှလုံးသားဟောင်း၊စိတ်ဓာတ်ဟောင်းတွေပဲ။ လူတွေဟာ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းသိခွင့်ရှိရမယ်။ မျှတတဲ့ဥပဒေဟာ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားတဲ့ ဥပဒေပဲ။ ဒီဥပဒေကိုမှ မယုံကြည်ရတော့ရင် လူတွေအတွက် ဘာကို လိုက်နာရမလဲဆိုတာ အခြေခံပြဿနာကြီးဖြစ်လာစေတယ်။ လူမိုက်တစ်ယောက်ဟာ တာဝန်ရှိသူ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံဟာ အလွန် အန္တရာယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် မြုပ်နှံလိုသူတွေဟာ အကြိမ်တစ်ရာစဉ်းစားပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေဆီကိုပဲ ရွေ့သွားကြတယ်။ ဒါကိုလည်း ယုတ္တိကျကျ လက်မခံနိုင်သေးတာတွေ့ရတယ်။
ချမ်းသာချင်ယောင်ဆောင်၊တိုးတက်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့အတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူး။ လူမွဲဟာ ဒေဝါလီခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သက်သာရာရပါတယ်။ လူမွဲဟာ သူဌေးဟန်ဆောင်နေရုံနဲ့ သူဌေးဖြစ်မလာပါဘူး။ ကိုယ်မလုပ်တတ်တဲ့စီးပွားရေးကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကို ခွဲပေးပြီး အခွန်ပြန်ကောက်ရင်တော့ အမြတ်ရကောင်းရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဗဟိုဘဏ်ကို နေပြည်တော်တစ်ခု၊ ရန်ကုန်တစ်ခုထားပြီး၊ဝန်ထမ်းတွေကို နေပြည်တော်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်ဗဟိုဘဏ်ကဝန်ထမ်းတွေ စနေရော၊ တနင်္ဂနွေပါ ရုံးတက်ရပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲပုံ ညံ့ဖျင်းမှုဟာ လူတိုင်းကို သောကများစေတာပါပဲ။ လူလတ်တန်းစားများများအလုပ်ရနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းမျိုးရှားပါးနေသေးသ၍ တိုင်းပြည်ရဲ့ အသက်ရှူပေါက်တွေ ပိတ်ဆို့နေဦးမှာပါပဲ။ စာရင်းဇယားအရ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာသုံးသန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက် တစ်ယောက်စီက တစ်လကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးရာပြန်ပို့ရင်တောင် မြန်မာပြည်ထဲကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင့်ငါးရာ စီးဝင်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ အခြေခံအလုပ်သမားတွေကို နိုင်ငံခြားကနေ တင်သွင်းခွင့်ပိတ်ထားလိုက်ရင် ပြည်တွင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် အခြေခံအခွင့်အလမ်းတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုတခေါက်ပြန်တော့ ရန်ကင်းစီးတီးမတ်မှာ တရုတ်တွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်။ အများစုက အလုပ်သမားပုံစံတွေပဲ။ နိုင်ငံခြားက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဝင်လာပြီး၊ ပြည်တွင်းခရိုနီနဲ့ပေါင်းပြီးဆောက်၊ အလုပ်သမားကအစ ပြည်ပကပဲ ခေါ်သွင်းပြီးလုပ်သွားရင် အကျိုးမရှိတဲ့ ပရောဂျတ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေမှာပဲ။ စီးပွားရေးအရတော့ အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်။ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးမရှိဘူး။ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ များလာတာဟာ နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးမရှိစေတော့တာပါပဲ။ အခြေခံပြဿနာက ဘာလဲဆိုရင် macroeconomic ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ဘဲ စီးပွားလုပ်တဲ့အချက်ပါပဲ။
Construction လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လိမ်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင် အစိုးရ စာမတတ်သေးလို့ပဲလို့ ယူဆနိုင်တယ်။ သိန်း တစ်ထောင်တန်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ အစိုးရဆီမှာ လိမ်ပြေးလို့မရလောက်အောင် လည်ပတ်ငွေရဲ့ အလားတူပမာဏဖြစ်စေ၊ ရာခိုင်နှုန်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေ၊ အစိုးရဆီမှာ စပေါ်ထားခိုင်းရမယ်။ အစိုးရရဲ့အလုပ်ဟာ ဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ မျှတတဲ့ ဈေးပြိုင်ရောင်းချမှုဖော်ဆောင်ရေးဆိုတာတွေလုပ်ရတယ်။ ဒါတွေကို တကယ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လုပ်ငန်းက ရှုံးနေသလဲ၊ ဘယ်လုပ်ငန်းက မြတ်နေသလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလိုသိဖို့ကို နှစ်စဉ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံရတယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ balance sheet ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်ကုမ်ပနီခွေးဖြစ်နေသလဲ တန်းသိတယ်။ ဦးဇော်ဇော် ရှယ်ရာဝယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ စင်ကာပူက Aussino တို့ဆိုရင် တစ်နှစ်လုံးမှ ၂ထောင်လား အမြတ်ထွက်တာ။ အစိုးရဟာ လူလည်တွေကို ဥပဒေနဲ့ထိန်းထားနိုင်မှ ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ လစာ၂ သောင်းတိုးပေးလို့၊ ဈေးတက်တဲ့ဈေးသည်တွေကို ဖမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့လည်း ရယ်စရာလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီသတင်းကြားမှ ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေလည်း ဈေးတက်ဖို့ သတိရကြတော့တယ်။
အခြေခံပြဿနာရှိနေတဲ့ အပင်တစ်ပင်ဟာ ရှင်သန်ဖို့ခက်တယ်။ အဖူး၊အပွင့်တွေ၊အသီးတွေခဏထားလိုက်ဦး၊ သူ့ရဲ့ အခြေအနေဆက်ကောင်းနေဖို့ကို ခက်တယ်။ အခြေခံပြဿနာများတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ပြည်သူတွေ အကျိုးစီးပွားကိုမပြောနဲ့၊ မလျော်ညီတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုတောင် မပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အထိ ဆိုးရွားသွားတယ်။ ဒါတွေဟာ ရယ်စရာမကောင်းတော့တဲ့ဟာသတွေ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ အနာဖေးခွာလိုက်၊ပြန်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတွေ။ အရူးမောင်းတဲ့လေယာဉ်ကိုစီးပြီး လိုရာခရီး ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်နေမယ်ထင်တဲ့စိတ်ကို ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ပြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ။